Michy Batshuayi Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka loo yaqaan 'Biography'
Sheekada Carruurnimada Pedro Neto iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Untold
Sheekada Carruurnimada Eric Garcia Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Untold
Home CIYAARAHA CADAADADA EE EUROPEAN Ciyaartoyda Kubadda Cagta Belgium Michy Batshuayi Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka loo yaqaan 'Biography'
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada dhameystiran ee kubadda cagta ee ugu caansan oo loo yaqaan 'nickname'Batsman". Maqaalkeenna Michy Batshuayi oo ah akhbaar aan ku habooneyn wuxuu kuugu keenayaa xisaab buuxa oo ah dhacdooyin la taaban karo oo laga bilaabo wakhtiga carruurnimadiisa ilaa taariikhda. Falanqayntu waxay ku lug leedahay sheekadiisa noloshiisa ka hor inta caan ka ah, asalka qoyska, nolosha xiriirka, iyo xaqiiqooyin kale oo caddayn ah oo caddaynaya (wax yar).
Haa, qof kastaa wuu ogyahay inuu karti u leeyahay inuu ka dhaadhiciyo himilooyinka la yaabka leh, laakiin qaddar yar ayaa tixgelinaya Michy Batshuayi's Bio kaas oo aad u xiiso badan. Hadda oo aan ado kale, aan bilaabi.
Michy Batshuayi Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka loo yaqaan 'Biography'Hore iyo Qoyska
Bilaabidda, Michy Batshuayi Atunga wuxuu ku dhashay 2nd ee Oktoobar 1993 ee magaalada Brussels, Belgium. Waxa uu ku dhashay hooyadiis, Viviane Leya Iseka iyo aabbihiis, Pino Batshuayi. Labada waalidba waxay ka soo jeedaan Afrikaanka, waxayna raadiyaan jihooyinkooda dib ugu noqoshada Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo. Waxay u haajireen Belguim iyagoo raadinaya daaqsinno cagaar ah oo si wanaagsan loogu fidinayo carruurtooda aan weli dhalan.
Kobaca Brussels, Young Batshuayi wuxuu taageero ka heley waalidiinta isboortiga jecel ee ku dhiirigeliyay isaga iyo walaalkiis Aaron Leya Iseka (sidoo kale kubad sameeyaha) si uu u hormariyo loona tababaro cayaaraha ay u jecel yihiin.
Taageerayaashooda ayaa si gaar ah u kordhay xaqiiqda ah in Bathshuayi ay soo bandhigtay awoodda kubadda cagta ee awoodda kubada cagta oo aan ka dhigin oo keliya isaga oo ka dhexjirta asxaabtiisa, laakiin waxa uu kudhuftay walaalkiis yar oo sidoo kale soo jiitay xiisaha kubada cagta.
Muddo dheer ma aysan dhicin ka hor inta aysan waalidiinta Batshuayi ku dhiirogelinin inuu kubada cagta u soo bandhigo kubada cagta isagoo isku qoraya akadeemiyadda dhallinyarada, RFC Evere, oo ka mid ah afar kooxood oo dhalinyaro ah halkaas oo uu bilaabay xirfadiisa.
Michy Batshuayi Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka loo yaqaan 'Biography'Dhismaha Xirfadaha
Dhaqdhaqaaq kubbadda cagta ah oo Batshuayi lagu ogaaday intii lagu jiray cayaartoyda dhalinyaradu waxay u muuqataa inuu u dheeraan lahaa kubada kubadda cagta isagoo aan marin, qaab cajiib ah oo uu saaxiibadiis u tixgeliyey inuu yahay naftiisa.
Si kastaba ha ahaatee, wuxuu ka heley raashin ka yimid kooxo kale oo arkayay isaga oo ka fogaanaya naftiisa. Waxaa xusid mudan in dhalinyaradiisu aad u tiro badan tahay inuu u wareegay kooxda dhalinyarada ee Anderlecht ee 2007 halkaasoo uu ka ciyaaray awoodda gooldhaliye iyo ujeedooyinkiisa.
Qaab ciyaareedkiisa ugu sarreeya ma uusan ka muuqan kooxda Standard Liège oo ka soo muuqday adeegyadiisa 2008. Batshuayi wuxuu nuujiyay niche isagoo naftiisa ku soo bandhigay qaab ciyaareedkiisa cajiibka ah, waxaana loo dallacsiiyay kooxda weyn markii uu da'diisu ahayd 18.
Michy Batshuayi Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka loo yaqaan 'Biography'Kacsanow inaad ku guulaysato
Batshuayi ma ahayn mid ka mid ah in uu lumiyo horumarka xirfad ee uu kufsaday. Qaab ciyaareedkiisa sare ee uu heysto wuxuu arkay isaga oo goolal ka dhaliyay 21 xilli ciyaareedkii 2013 / 2014 ee Standard Liège. Ciyaartoyda kale ee ka midka ah kuwa kale waxay ku guuleysteen abaalmarinta kabaha dahabka ee loo yaqaan 'Ebony Shoe Award' taasoo lagu aqoonsaday ciyaartoyda ugu fiican Afrika ee ugu fiican Belgium.
Bathshuayi wuxuu sii waday farshaxiisa farshaxanka ee Marseille, koox Faransiis ah oo uu u saxiixay 2014. Waxa ay aheyd Marseille in qaab ciyaareedkiisa gooldhalinta uu soo jiitay kooxo Ingiriis ah oo ay ku jiraan Chelsea FC iyo Westham. Inta kale, sida ay yiraahdaan, waa taariikh.
Michy Batshuayi Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka loo yaqaan 'Biography'Nolosha Xiriirka
Batshuayi waa mid ka mid ah ciyaartoyda kubadda cakiran ee kubada cagta ee muhimka ah ee ku saabsan nolosha xiriirkooda. Tani waxay ka dhigtay qofkasta oo ku tala-jira in cidda guushu ku habboon tahay ay shukaansan karto xilligan.
Looma arko gabadhu isaga oo la jooga munaasabad ama xitaa dibedda. Inkasta oo dad badani aaminsan yihiin in uu ku fiicnaado inuu ilaaliyo noloshiisa gaarka ah ee gaarka loo leeyahay, qaar kalana waxay aaminsanyihiin inay tahay arrin waqti uun ka hor inta uusan soo bandhigin isxilkiisa ama saaxiibkiisa. Dhawrsoonow, waxaanu bixinaynaa cusbooneysiinta horumarinta ee laga hadlayo sida ay u dhacayaan.
Michy Batshuayi Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka loo yaqaan 'Biography'Ku dheelitir qiimeynta FIFA
Michy ayaa ka mid ah ciyaartoyda runtii ka taxaddariya qiimeynta kubada cagta ee 'EA Sports' ciyaar caan ah. Fiiri jawaabtiisa uu ka bixiyay 2018 FIFA ee hoos ku qoran;
Michy Batshuayi Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka loo yaqaan 'Biography'Sameeyn aan sifo lahayn
Inkastoo Batshuayi uu Chelsea joogay, wuxuu ku dhacay dab aad u daran ka dib markii uu soo bandhigay ciyaar aad u wanaagsan oo u muuqatay inuu ku qoslayo saaxiibkiisa Alvaro Morata iyadoo lumisay rigoore. Dhacdadan ayaa dhacday ka dib markii guuldaradii Chelsea ay ka soo gaartay Arenal guushii ay ka gaareen gaarsiinta bulshada 2017. Batshuayi ayaa la bedelay Morata intii lagu jiray daqiiqadii 74th ee ciyaarta si uu ugu guul darreysto inuu soo jiito.
Cayaartu waxay ku dhufatay barbar socotay 1-1, iyada oo rigoore loo dhigay si loo go'aamiyo guusha. Alvaro Morata oo la socda Thibaut Courtois Rigoorooyinka la seegay ayaa aheyd inay Arsenal ku guuleystaan ​​ciyaarta. Maxaad heshay taageerayaashii qosolka ahaa markii filimku u muuqday inuu tusi doono Batshuayi oo ka qosli doona Morata oo si cad u xanaaqay luminta.
Si kastaba ha ahaatee, Batshuayi ayaa Twitter-kiisa ku soo qaaday daqiiqado ka dib si uu u saxo waxa uu ku soo qaatay sida qaldan u fahmay:
"Wow lol dadka qaar run ahaantii ma aaminsan yihiin in aan qosliyay saaxiibkay iyo / ama annaga lumay? Waan ka xumahay inaan niyad jabo laakiin ma aanan aheyn "
Michy Batshuayi Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka loo yaqaan 'Biography'Jacaylka joornaalada
Batshuayi waxay leedahay sharaf leh daawashada iyo raacida taxanaha kartoonada. Hawlaha mid ka mid ah hawlaha daba-galka ah wuxuu leeyahay saameyn aad u farabadan oo ka baxsan madadaalo sida uu u qeexayo dareenkiisa. Waxaa laga soo xigtaa jilayaasha loo jecel yahay kartoonada waaweyn ee loo yaqaan 'Sponge Bob' oo waligiisna uma muuqdaan in ay haystaan ​​ku filan filimka Sponge Bob.
Intaas waxaa sii dheer, markuu arkay isagoo xiran sanduuq ka hooseeya xirmada. Feerka (sawirka hoos ku xusan gaabnaanta hufan) wuxuu muujinayaa dabeecadda badda ee qoto dheer ee xirkiisa. Runtii jacaylka uu u qabo kartuunku ma yaqaan wax xuduud ah.
Michy Batshuayi Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka loo yaqaan 'Biography'Big Kid at Heart
Batshuayi waa mid aan marnaba u muuqan inuu da 'ahaan u shaqeynayo sida caddaynta uu aruursaday ee alaabta ciyaarta. 25-sano jir wuxuu leeyahay qashin badan oo alaabada lagu ciyaaro oo uu ku tilmaamayo matxafkiisa gaarka ah. "Matxafka shakhsiyeed" wuxuu ka kooban yahay wasiir weyn oo quraarado quraarado leh oo lagu buuxiyo qalabka kubbadda qaaska ah.
Ma aha oo kaliya madadaalada yar, Batshuayi waxay u egtahay in ay heshay ciyaaro weyn taas oo u muuqata inay la kulmayso da'diisa. Waa sawir buuxa oo ka soo jeeda sawirada caanka ah Dragon Ball Z.
Michy Batshuayi Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka loo yaqaan 'Biography'Sababaha ka dambeeya Nickname
Sababtoo ah jacaylkiisa jilitaanka, Batshuayi ayaa la siiyey naaneyska 'Batsman', astaan ​​uu jecel yahay oo sidoo kale qeexaya. Dabeecada Batman waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah kuwa ka yimaada mugdiga si ay u sameeyaan aragti la'aan.
Batshuayi waxay ka imaaneysaa kursiga keydka waxaana wali kudoonaya goolasha goolasha. Isagoo ka hadlayay xeeladaha, Michy's FIFA 2018 Xiddigaha Koobka Adduunka ee Koobka Adduunka ayaa ku guuldareystay inuu mar uun ku guul darreysto markii uu arkay kubad uu ku dhuftay booska goolka.
Michy Batshuayi Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka loo yaqaan 'Biography'Xaqiiqooyinka shakhsiga
Michy Batshuayi waa midka jecel waxa uu sameeyo iyo raadka jilicsanaanta xitaa marka arrimuhu uusan qorsheynin. Si kastaba ha ahaatee, si adag ayuu u shaqeeyaa oo wuxuu isku dayaa inuu suurtogal ka dhigo inuu guuleysto guulihiisa.
Intaas waxaa dheer, wuxuu ku socdaa mid degan, wuxuu leeyahay dareenka diblomaasiyadeed wuxuuna isku deyayaa inuu suurtogal u yahay si looga fogaado isku dhacyada.
Hantida FACT: Waad ku mahadsantihiin akhrinta Michy Batshuayi Childhood Story plus iyo xaqiiqooyinka taariikhda aan la sheegin. At LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan ku haboonayn maqaalkani, fadlan dhiibo faallooyinkaaga ama nagala soo xiriir!
Sheekada Carruurnimada Thorgan Hazard Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeedka ee Untold
Sheekada Carruurnimada Manuel Akanji Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Untold
Sheekada Carruurnimada Andriy Yarmolenko Plus Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Untold
Sheekada Carruurnimada Billy Gilmour iyo Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Untold
Sheekada Carruurnimada Fikayo Tomori iyo Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Untold
Taariikhda wax laga beddelay: Sebtember 10, 2020
Taariikhda wax laga beddelay: Sebtember 9, 2020
Axiis Oliseh Sheeko dhalasho sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka sawir la'aanta
Ilkay Gundogan Sheeko Waaweyn ee sheeko xeel dheer
Maurizio Sarri Sheeko Sheeko Xaqiiqo Weedho Wanaagsan
Taariikhda wax laga beddelay: Janaayo 30, 2019
Henrikh Mkhitaryan Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xadidan
Reece James Childhood Sheeko Dheer Xaqiiqda Taariikh Nololeedka ee aan loo Baxin
Sheekada Taariikh nololeedka Mason Mount Plus Xaqiiqooyinka Taariikh nololeed aan la qorin